နွေဦးရာသီရဲ့နောက်ဆုံးလကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ FBSရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်များအမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်လာပြီ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကလဲ တစ်လပြီးဆုံးသွားတိုင်း နောက်တစ်လမှာ ကံထူးရှင်အသစ်အသစ်တွေကိုရွေးချယ်ပေးနေပါတယ်။ မျက်လုံးခဏမှိတ်ပြီး လိုချင်တဲ့အရာကိုဆန္ဒပြုလိုက်ပါ။ လူတွေကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာများ၊ ငွေနဲ့ဝယ်လို့ရနိုင်မယ့်အရာများကိုသာဆန္ဒပြုပါ: ရော့ခ်စတားတစ်ယောက် သင်အမြဲတမ်းဖြစ်လာချင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ လျှပ်စစ်ဂစ်တာတစ်လက်၊ သင်အချစ်ဆုံးမိန်းကလေးသူငယ်ချင်းက စက်ဘီးကိုဘယ်လိုစီးရမယ်ဆိုတာမသိသေးရင်တော့ စက်ဘီးတစ်စီး၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်ညီလေးအတွက် စကိတ်တစ်ခု။ သင့်ရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်ဝအောင်FBSကကူညီပေးနိုင်ပါတယ်!
"စိတ်​ကူးအိပ်​မက်​များ အမှန်​တကယ်​ဖြစ်​လာပြီ" ဆိုတဲ့ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ဟာ ဖောက်သည်တော်တွေအလွန်နှစ်သက်သဘောကျတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လစဉ်လတိုင်းလဲ ဖောက်သည်တော်တွေရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို တကယ်ဖြစ်လာအောင် ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးနေပါတယ်! ဒီမှာကတော့ FBSရဲ့အကူအညီနဲ့သူတို့ရူးသွပ်စွာနဲ့ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးတွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကံထူးရှင်များပဲဖြစ်ပါတယ် - ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ:
• အင်ဒိုနီးရှားမှ Samsu Rizal
၁. FBS အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ: https://my.fbs.com/registration
၂. သင်၏ FBSပရိုဖိုင်ကို Facebook သို့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ (အပြာရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ): https://fbs.com/promo/dreams
ကျေးဇူးပြု၍, သင့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြောပြပါ. သင့်ရဲ့အိပ်မက်က သင်အပြောကောင်းရင်ကောင်းသလောက် တကယ်ဖြစ်လာဖို့အခွင့်အရေးပိုများလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကူးအိပ်မက်တစ်ခုမဟုတ်လို့ ငွေကြေးအတွက်ဆန္ဒမပြုပါနဲ့။